USimona no-Angela-ICawe ikumsi kaSathana-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
USimona no-Angela-ICawe ikumsi kaSathana
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Angela ngoFebruwari 8, 2021:
Ngale ngokuhlwa uMama uvele njengoKumkanikazi noMama wabo bonke abantu.
Wayenxibe ilokhwe epinki kwaye esongelwe ngengubo enkulu eluhlaza-luhlaza; ingubo enye ikwagqume nentloko. Umama wayevule iingalo zakhe ebonakalisa ukuba wamkelekile kwaye phantsi kweenyawo zakhe kwakuze umhlaba. Kuyo kubonakala iimfazwe neentlekele ezahlukeneyo. Umhlaba ubujikeleza ngesiyezi kwaye ngamanye amaxesha uye wehla, ngokungathi ubonakalisa imiboniso ngokufanelekileyo. Ngasekunene kukaMama yayinguNyana wakhe, uYesu. Wayesemnqamlezweni kwaye wayeneempawu zePassion. Ubuso bakhe babuhlungu kwaye uMama wayemjongile, kwaye amehlo akhe egcwele iinyembezi.
Bantwana abathandekayo, ndiyabulela ukuba ngokuhlwa nje nibuyele kwihlathi lam elisikelelekileyo ukuze nindamkele kwaye ndimamele izinto endizokuxelela zona. Bantwana abathandekayo, umhlaba udinga umthandazo, iintsapho zifuna umthandazo, nina balapha nifuna umthandazo. Ndikho, ndilapha ukuzisa uYesu: Ndilapha kunye noYesu endimthandayo. Bantwana, kufuneka nifunde ukuthandaza ngentliziyo kwaye namkele umnqamlezo. Amaxesha amaninzi ndize kuwe ndisithi: “Thanda umnqamlezo, umnqamlezo uyakha, ngumnqamlezo osindisayo. Thanda, thanda kwaye musa ukurhoxa. ” Uninzi lwenu luqhele ukwalatha nokujonga iminqamlezo yabanye ngokungakhathali. Bantwana, uThixo akaze awunike umnqamlezo ongaphezu kobunzima onako ukubuthwala, kodwa lo mnqamlezo uyasinda xa umnqamlezo ungamkelwa. Nceda uthande umnqamlezo wakho. Jonga owam noYesu wakho, jonga uthandaze umnqamlezo.
Emva koko uMama wandicela ukuba ndithandaze kunye naye; Ndathandazela iCawe ngokukodwa. Emva koko uMama waqala wathetha kwakhona.
Bantwana bam, thandazeleni kakhulu iCawe yam endiyithandayo kwaye nithandazele ukuba umantyi oyinyaniso weCawa ungalahleki. Icawa isemsi kaSathana kwaye imithandazo yakho iyafuneka ukuze obu bubi bumshiye. Thandazela oonyana bam abanyuliweyo nabathandwayo [ababingeleli] ukuba bangayeka ukwenza ihlazo, baphambanise abantu bakaThixo kwiCawa engcwele.
Ekugqibeleni uMama wasikelela wonke umntu. Egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen.
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona Nge-8 kaFebruwari, 2021:
Ndabona uMama; wayenelokhwe epinki elula, entloko wayenesithsaba senkosazana kunye nesigqubuthelo esiphindiweyo esasisebenza njengengubo eluhlaza-luhlaza. Ezandleni zakhe uMama wayenebhasikithi egcwele iiroses ezimhlophe ephalaza iipetali kuthi, kodwa ngaphandle kokuphulukana nobuhle babo. Malunga neenyawo zikaMama kwakukho amafu amaninzi amhlophe kwaye ngaphantsi kwawo kwakukho umhlaba.
Bantwana bam abathandekayo, ixesha elide ngoku uThixo uBawo, ngenceba yakhe engenasiphelo, ebendivumela ukuba ndehle phakathi kwenu, ndiniphathele umyalezo wothando noxolo, ukuniluleka, ukunibongoza, nokumema umthandazo nokholo. Bantwana bam, ukholo lwenene aluyonto ilahlekileyo: lunjengomlilo - lunokuba nedangatye elizolileyo elidanyazayo okanye lingangumlilo ovuthayo. Ukuze ube ngumlilo ovuthayo, ukholo kufuneka londliwe ngomthandazo, uthando, uMthendeleko we-Ekaristi. Bantwana bam, ndiza kuqokelela umkhosi wam,cf. Ibali leNenekazi lethu elincinci kwaye UGidiyon omtsha ilungele ukholo lokwenene nezixhobo * ngesandla, ikulungele ukulwa nothando. Bantwana bam, sele ndinishiya nemiyalezo yam kangangexesha elithile, kodwa yeha, nimane ningamameli, nizenza lukhuni iintliziyo zenu. Ndiza kuwe njengomama, kwaye ngenxa yoko ndikuthanda ngothando olukhulu kwaye ndiza kuwe ndikuncede, ndikukhokele ngokukhuselekileyo endlwini kaBawo; Ndikubamba ngesandla ndikukhokele. Ncedani, bantwana bam, zivumeleni nikhokelwe: amaxesha anzima alindele nina - vumelani nithandwe, bantwana bam, zivumeleni nithandwe (kwaye ngelixesha wayethetha lento, kwehla iinyembezi ebusweni bakhe). Bantwana bam, ukuba benikuqonda kuphela ukuba lukhulu kangakanani uthando lukaKristu ngomntu ngamnye kuni, ukuba nje benimvumela angene ebomini benu, anganigcwalisa ngalo lonke ufefe nentsikelelo, aninike amandla okujongana nesona saqhwithi sinzima ngoncumo. Ndiyanithanda, bantwana, ndiyanithanda. Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama ukuza kum.
[* Phantse ngokuqinisekileyo iRosari (icacisiwe). Inqaku lomguquleli.]
cf. Ibali leNenekazi lethu elincinci kwaye UGidiyon omtsha
← IGisella - Iziganeko eziDlamkileyo kunye…
UPedro-Fumanisa ukuthanda kwakhe… →